I-Downs idedele impama kowe-caf - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-Downs idedele impama kowe-caf
UTHEMBA Zwane ovalele amagoli amabili ezakhe ziguqisa iCR Belouizdad yase-Algeria ngo-5-1 koweCaf Champions League.
KAYIBANGA naluzwelo iMamelodi Sundowns inenebula iCR Belouizdad yase-Algeria ngo-5-1 emdlalweni kaGroup B weCaf Champions League izolo ngeSonto ntambama eBenjamin Mkapa National Stadium, eTanzania.
IDowns isivule kahle isigaba samaqoqo ihlula i-Al Hilal yase-Sudan eTshwane. Yiyona eqhwakele kuleli qoqo. Amagoli eDowns kulo mdlalo avalelwe enethini nguThemba Zwane obhakuzise amabili ngomzuzu ka-4 noka-54, uPeter Shalulile ngoka-47, uLebohang Maboe ngoka-75 noKermit Erasmus ngoka-89.
Umdlalo wayizolo bekumele udlalelwe e-Algeria kodwa uhulumeni wakuleliya lizwe wala waphetha, ubeka isizathu sokugadla mawala kweCovid-19 eNingizimu Afrika.
IKaizer Chiefs ibibhekene ne-Wydad Casablanca yaseMorocco izolo kusihlwa eBurkina Faso. Nalo mdlalo bekumele udlalelwe eMorocco kodwa nakhona kwakhalwa ngokubhilita kweCovid-19 kuleli.
Ukuba matasa nemidlalo yeCaf kweDowns neChiefs, kuholele ekutheni kuhlehliswe imidlalo yala makilabhu yeDStv Premiership obekumele ayigijime ngokwahlukana kusasa ngoLwesibili.
ISundowns bekumele ivakashele iStellebosch FC kanti iChiefs ibiqhathwe neTshakhuma Tsha Madzivhandila ekuhambeni.
IDowns ihlehliselwe imidlalo emibili njengoba bekumele ibhekane nePolokwane City izolo kwi-last 16 yeNedbank Cup. Lo mdlalo usuzodlalwa ngoLwesithathu lomhla ka-10 kuNdasa (March) eTshwane.
ISundowns yenza kahle kwiCaf nje, nakwiDStv Premiership isayibambe kahle njengoba kuyiyona eqhwakele kwi-log. Le kilabhu yiyona ebe yizingqwele zeChampions League ngo-2016 isacijwa nguPitso “Jingles” Mosimane osepheka i-Al Ahly yase-Egypt nayo afike wayinqobisa lesi sicoco nyakenye.
Previous articleBenze ezibukwayo kwiMaths neScience
Next articleLimlahlile icala owatshontsha ingane